Rehefa mametraka HD toerana manodidina toy ny KLAX, dia toa mahatahotra
fanontaniana Rehefa mametraka HD toerana manodidina toy ny KLAX, dia toa mahatahotra
1 taona 9 volana lasa izay #595 by svanarsdel
Rehefa hametraka photoreal toerana manodidina dia toa ratsy ny toerana misy anao. Inona no ataoko diso.
1 taona 9 volana lasa izay #605 by archangelmj12
Tsy mety ho antony vitsivitsy vokatra izany. Voalohany dia ny hatsaran'ny ny sary, sy ny karazana. Faharoa, youre solosaina dia tsy maintsy ho afaka handamina ny sary entana ary koa ny fanalefahana hafa tolotra. Araka ny Tokony ho fantatrao ny MSFS no tena hery mandrakizay kosa natopiny sim naorina ho an'ny sidina., Ary na tany am-boalohany dia dunk fandaharana, ny hoe Bill Gates nanokatra ny zo ho an'ny fandaharana ao 2007 ny olona izay nisafidy ny sahy. Na dia tsy misy Steam ny jatony arivo alaina manana ny fahaiza-mamorona tanteraka youre manana tontolo iainana. Marina niteny Jesosy, dia misy kokoa ny mpamorona izay latsaky ny 20 amin'ny fandaharana ity sy ny zava-misy dia tena tsara kokoa sy tsara kokoa miaraka amin'ny fahitana ny zavatra rehetra momba ny fiaramanidina dia, mihoatra noho Ace ny vondrona lehibe tafiditra ny fandaharana ny MSFS. Ary raha te zavatra izay hamonjy anao taona miezaka hahatakatra ny fandaharana, ary mba ataovy tonga lafatra mihazakazaka, misy entana roa dia mila. Ny voalohany dia FS tweak ny fps. Izany no tena tsy manam-paharoa sy miavaka fitaovana, tsotra hampiasa ka hanoro anao izay tsy fantatro sy ny fomba azon'ny olona tsara ny rafitra. Ny faharoa dia FSPS Xtreme. Izany dia mandondòna ny ba kiraro ny. Im mampiasa 500 gig taona 7 solosaina findainy avy Toshiba.intel fototra i5.i manana ny 3850 fiaramanidina, 459 karazana hametraka ons, ary tsara ny 45000 Airlines truelife mihazakazaka amin'ny fandaharam-potoana, Andi dont na dia manana glitch. ny nalaina manakaiky ny folo taona amin'ity taona ity mba hahazo izany ny lavitra na ny thats ny 5 solosaina sy ny 15 reinstalls sy ny famafana mainty efijery nianjera, ary tena nahazo ny dika mitovy amin'ny scripting ny fandaharana avy amin'ny Microsoft. Nianarako tao 2007 avy amin'ny Microsoft fa nisy tamin'ireny nandeha ho alot ny fahadisoana sy screwups, nefa ankehitriny ny vondrom-piarahamonina no ho tafavoaka velona weve naka ny fandaharana ny havoana nanonofy tsy azo atao. Manantena aho fa izany no nanampy, na fanontaniana, mamela hafatra eto sady ratsy hiverina aminao. Theres alot ny fitaka amin'ny varotra, ary amin'ny fotoana dia hianatra. Ankoatra izany, ny amin'ny toerana tsara indrindra eto, dia ny manao tsara fotsiny. Olana Ay? na inona na inona, ampahafantaro ahy. IM tany am-boalohany MSFS answerman. Raha cant mahazo izany Izaho no hahazo azy.
1 taona 8 volana lasa izay #613 by rikoooo
Misaotra anao archangelmj12 fa Tena valin-.
svanarsdel, isika dia ho vonona hanampy raha afaka mandefa sary kely, noho izany dia afaka hilaza aminao inona no tsy mety.